Ọ bụghị onye ọ bụla gị na gị na-emekọrịta ihe bụ onye ahịa | Martech Zone
Mmekọrịta ịntanetị na nleta pụrụ iche na weebụsaịtị gị abụghị ndị ahịa maka azụmahịa gị, ma ọ bụ ọbụna ndị ahịa. Ndị ụlọ ọrụ na-emehie mgbe nile na-eche na nleta ọ bụla na weebụsaịtị bụ onye nwere mmasị na ngwaahịa ha, ma ọ bụ na onye ọ bụla na-ebudata otu akwụkwọ akụkọ dị njikere ịzụta.
Ọ bụghị otú ahụ. Ọ dịghị ma ọlị.
Onye nleta weebụ nwere ike ịnwe ọtụtụ ebumnuche dị iche iche iji nyochaa saịtị gị ma jiri oge gị na-etinye oge gị, ọ nweghị nke ọ bụla metụtara ịbụ ezigbo onye ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọbịa na saịtị gị nwere ike ịbụ:
Ndị asọmpi na-elegide gị anya.
Ndị na-achọ ọrụ na-achọ igwe kacha mma.
Mụ akwụkwọ na-enyocha akwụkwọ okwu kọleji.
Ma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla dabara n'ụdị atọ a na-anọkarị n'ihe ize ndụ nke ịkpọ oku ekwentị ma ọ bụ ịgbanye na listi email.
Itinye onye nleta ọ bụla n’ime bọket ndị ahịa bụ omume dị egwu. Ọ bụghị naanị nnukwu mmiri na akụ iji chụsoo onye ọ bụla na-ekenye nọmba ekwentị ya ma ọ bụ adreesị ozi-e, mana ọ nwekwara ike ịmepụta ahụmịhe na-adịghị mma maka ndị na-enweghị ebumnuche nke ịbụ ebumnuche maka ọtụtụ ihe ahịa.
Tụgharị ndị ọbịa na ndị ahịa, ma ọ bụ naanị ịmara ndị ọbịa ruru eru ịgbanwe, chọrọ nghọta miri emi banyere ndị ha bụ. Nke a bụ ebe 3D (akụkụ atọ) na-eduga akara abata n’egwuregwu.
Ndu isi abụghị ihe ọhụrụ, mana ịrị elu nke Nnukwu data emeela ka ọhụhụ ọhụụ nke ndu 3D na-eweta ihe omimi na-agbakwunye omimi ka ndị ahịa na ndị ọkachamara n'ahịa si ele ndị ahịa na atụmanya anya. Nkọwa 3D bụ ngbanwe sitere n'okike nke data bara uru ị na-achịkọta na ndị ahịa gị kemgbe ọtụtụ afọ, ma jiri ya rụọ ọrụ kachasị mma maka ndị ahịa a na n'ikpeazụ, mee ka ahịa gị na akara gị dịkwuo elu.
Ma azụmahịa ọ gbadoro ụkwụ na atụmatụ B2C ma ọ bụ B2B, atụmatụ iduzi 3D nwere ike inyere ha aka ịlele etu atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa si dakọtara na profaịlụ ha "kachasị mma", ha niile ka ị na-enyocha ọkwa nke itinye aka na ntinye aka ha. Nke a na-eme ka o doo anya na ị na-elekwasị anya na ndị nwere ike ịzụta, kama ịwụnye ụgbụ buru ibu ma dị oke ọnụ iji ruo onye ọbịa ọ bụla bịara na saịtị gị.
Nke mbụ, Chọpụta demographics ma ọ bụ firmagraphics
Ga-ewulite ihe 3D gị site na ịmata onye ahịa gị. Ga-achọ ịmata “isnye bụ onye a? Hà kwesịrị ekwesị maka mkpakọrịta m? ” Ofdị azụmahịa ị nọ na ya ga-ekpebi profaịlụ ị ga-eji 3D akara ndị ahịa gị.
Organizationstù B2C kwesịrị ilekwasị anya na data igwe mmadụ, dị ka afọ ha, okike, ego, ọrụ, ọnọdụ alụmdi na nwunye, ọnụ ọgụgụ ụmụaka, eserese nke ụlọ ha, koodu zip, ndenye aha ndị otu, ndị otu na ndị ọzọ, wdg.
Organizationstù B2B kwesịrị ilekwasị anya na firmagraphicdata, nke gụnyere ego ụlọ ọrụ, afọ azụmahịa, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, ịbịaru ụlọ ndị ọzọ nso, koodu zip, ọnọdụ ndị nwere obere, ọnụ ọgụgụ nke ebe ọrụ na ihe ndị yiri ya.
Akụkụ nke abụọ nke 3D akara bụ njikọ aka
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-achọ ịma ka onye ahịa a si etinye aka na ika gị? Ọ bụ naanị n'ahịa ka ha na-ahụ gị? Ha na-eji ekwentị agwa gị okwu mgbe niile? Ha na-eso gị na Twitter, Facebook na Instragram ma lelee na FourSquare mgbe ha gara na ọnọdụ gị? Ha na ha na webinars gị? Otú ha si emekọrịta ihe nwere ike imetụta mmekọrịta ha na gị. Inwekwu mmekọrịta onwe onye na-apụtakarị mmekọrịta onwe onye karịa.
Nke ato, mata ebe onye ahia gi no na nmekorita gi na gi
Ọ bụrụ n’abụghị, ị ga-ekewa nchekwa data gị dịka ogologo oge onye ahịa gị si bụrụ onye ahịa gị. Nke a ọ bụ onye ahịa ndụ niile zụtara ngwaahịa ọ bụla ị nwere? Nke a obu onye ahia ohuru nke amaghi banyere onyinye nke ulo oru gi? Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, ụdị ozi ị na-ezigara onye ahịa ogologo ndụ ya dị iche na nke ị na-ezigara mmadụ na mbido mmekọrịta ya na gị.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ekepụta ọdụ data ha site na nchịkọta mmadụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ naanị, ha kwesịrị ịbụ na-echebara ọkwa onye ahịa na ndụ ndụ ma dabere na 3D akara. A ọhụrụ ahịa onye naanị mgbe emailed gị agaghị enwe ike dị ka ogologo oge ahịa ndị gara gị ọrụ. N’otu aka ahụ, onye ị zutere n’ebe a na-azụ ahịa nwere ike ịbụ onye ahịa na-esighi ike karịa onye zụtara gị nwayọ n ’ụlọ gị. Won't gaghị ama nke ahụ n’enweghị akara 3D.
-enye ọ bụla onye nleta na-acha ọcha-glove ọgwụgwọ.
N'ime okwu a niile banyere iji ndu ndu 3D na-elekwasị anya na ndị ọbịa nwere ikike ịzụta, m ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ekwughị m na mkparịta ụka ọ bụla na onye ọbịa kwesịrị ịbụ ahụmịhe na-acha ọcha-glove - na-a atta ntị, enyi na enyi na ngwọta -adara na ihu ọma onye ọbịa. Cheta, ọ bụghị maka ịme ego kacha mma na ire ere mbụ ahụ. Ọ bụ maka ịnye ihe onye nleta chọrọ n'ezie, nke ga-eme ka ahụmịhe ndị ahịa dị mma na ire ahịa n'ọdịnihu. Gbasoo nkwanye ugwu a maka onye ọbịa ọ bụla, ọbụlagodi ndị asọmpi, ndị na-achọ ọrụ, na ụmụ akwụkwọ kọleji. Maghị mgbe obere obiọma ga-akwụ ụgwọ ụgwọ mgbe emechara.
Nweghị ike ịchọta ndị ahịa kachasị mma. Ga-azụlite ha. Kedu? Site n'inyere ha aka ịgagharị na-enweghị ntụpọ site n'akụkụ nke ọ bụla nke ndụ ahụ, ịchọta ọdịnaya ma ọ bụ njikọ kwesịrị ekwesị ha na-achọ n'ụzọ ahụ. Nke a bụ ike nke Right On Interactive's Lifecycle Marketing ngwọta: na-enye ndị otu ike ike ịmara kpọmkwem ebe atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa nọ na mmekọrịta ha na akara-site na atụmanya na onye na-agba ọsọ-yana ụzọ kachasị mma iji gakwuru ha iji bulie uru ndụ ha niile.
ngosi: Right Na mmekọrịta bụ onye ahịa nke anyị na onye nkwado nke Martech Zone. Muta ihe banyere uzo ahia nke ndu ha taa:
Mụtakwuo maka Mmetụta Na mmekọrịta
Tags: Ntinye 3db2bb2cNdị asọmpiahịaahịa ndụahịa ahịa ndụihe ngosinkọwapụtaihe nkiriụmụ akwụkwọ na-achọ ọrụndu akaraonye ọbịa na ntanetịnri na mmekọrịtandị ọbịaweb ndị ọbịa
Troy Burk, onye isi na Onye guzobere Right Na mmekọrịta, bụ onye ndu echiche na onye ọkà okwu ama ama n'okwu banyere ire ahịa ndụ, ahịa azụmaahịa, isi ihe na nurturing, yana ịre ahịa email. Troy nwetara nzere bachelọ na Mahadum Ball State. O bi na Indianapolis ya na nwunye ya na ụmụ ya atọ ebe ọ na-eje ozi na Greater Indianapolis Chamber of Commerce's Membershood Committee Kọmitii ma tinye aka na egwuregwu ndị ntorobịa.